Ogaden News Agency (ONA) – Masaajid Addis Ababa Lagu Dumiyay & Xiisad Kadhalatay.
Posted by Dulmane	/ May 25, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya khilaaf xoogan oo sookala dhex galay dadka muslimiinta ah ee magaalada Addis Ababa iyo xukuumada wayaanaha ee fadhigoodu yahay Addis Ababa.
Sida xogta aan kuhelayno khilaafka ayaa yimid kadib markii dhulka lala simay masaajid wayn oo kuyaalay xaafada Ashawa-mida ee magaalada Addis Ababa, kaas oo sida lasheegay ay kucibaadaysan jireen kumanaan muslimiin ah oo kunool xaafada Ashawa-mida iyo nawaaxigeeda.
Dadka muslimiinta ah oo aad uga xumaaday faldambiyeedka ay kukaceen maamulka wayaanuhu ayaa isugu soobaxay jidadka waawayn ee magaalada Addis Ababa iyagoo muujinaya sida ay uga xun yihiin talaabadan sharci darada ah ee lagu baabi’iyay masjidka wayn ee xaafada Ashawa-mida kaas oo ay kucibaadaysan jireen kumanaan qof oo muslim ah.
Ciidanka wayaanaha oo aan ukala aabo yeelin ciroole iyo caano-nuug ayaa lasheegayaa in ay xabsiga dhigeen ugu yaraan 36 qof oo dadkii mudaharaadayay ah, iyagoo dad boqolaal ahna ugaystay jidh-dil iyo dhibaatooyin kale.
Muslimiinta xaafada Ashawa-mida iyo uruka muslimiinta Itoobiya oo iskaashanaya ayaa lasheegay in ay cabashadooda hordhigeen maamulka sare ee wayaanaha, mna jiro wax jawaab ah oo sax oo ay kaheleen, sidoo kale dadka aqoonta uleh taliska wayaanaha ayaa sheegaya in xukuumadu aysan waxba kaqaban doonin talaabadan sharci darada ah ee ciidanka wayaanuhu ay kula dhaqaaqeen dadka muslimiinta ah.
Xukuumada Gumaysiga Itoobiya ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay si aan kala joogsi lahayn u hagar daamaynaysay dadka muslimiinta ah ee Itoobiya kudhaqan waxaana jira dad aad ubadan oo muslimiin ah oo kujira jeelasha wadanka kuwaas oo dad culimo ah ay kujiraan.